You are here: Home somal Coach Jama Aden (Karaiin) oo Casuumad Rasmiya Ka Helay Madaxweyne Geelle
Waxaa uu Jama la kulmayaa waqtiga gaaban ee uu ku suganyey Djibouti madaxweynaha, wasiirka wasaaradda Sportiga, iyo cayaartoyda orrodada ee waddanka Djibouti.
Socdaalkan Tababare Jama Aden uu maanta ku joogo dalka Djibouti ayaa ah kii ugu horreeyey ee uu kula kulmo madaxda dalkaa, iyo ciyaartoydoodaba. Waxaana halkaa ka muuqda usoo jeedsi ay dawaladda Djibouti ugu diyaar noqonaysa ka muuqashada ciyaaraha orrodada ee caalamka. Sidaynu la soconay ciyaarihii Arab Games ee ka dhacay December 2011 magaalada Doha ee Qatar; qaybta dhallinta Juniors ee orodka masaafada 1500m waxaa si lama filaan ah u qaaday ororyahan dhallin yar oo layidhaa Hassan Ayaanle una dhashay waddankan Djibouti. Biladdaa dahabka oo noqotay mid dhiirri gelisay dhamaan ciyaartoydii reer Djibouti iyo madaxdoodiiba. Waxay arrintani dib u soo noolaysay hammadii iyo horumarkii ciyaartoydii orrodada Marathon ee reer Djibouti ee dabayaaqadii sannadadii 80-90nadii lagu yaqaanay.
Maraan waraystay tababare Jama ayaa ii sheegay in socdaalkani uu yahay mid ay isaga iyo madaxda reer Djibouti ay kaga wada hadlayaan sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha ciyaaryahanada Djibouti, iyo aasaasidda xidhiidh ka dhaxeeya labadooda.
Waxaa Tababare Jama Aden beryahan dambe uu ku suganyey Waddanka Kenya, isagoo u diyaarinaya ciyaartoydiisa ciyaaraha Olympics ee xagaaggan lagu qaban doono magaalada London. Tababare Jama ayaa noqday tababare qaalli ku ah caalamka orrodada,waxayna taasi ku tusaysaa sida weyn ee cidwalba oo ororada khusaysaa ay u doonayaan inuu garabkooda joogo, kana faaiidaystaan khibraha gaarkaa ee uu ilaahay ku manaystay. Waxaa ugu dambeysay doon doonistaa, Company ga weyn ee NIKE oo u doortay Jama Aden inuu Madax ka noqdo xaruntooda, ama institute kooda weyn eek u taalla magaalada Portland, Oregon carriga Mareykanka. Arrintani waxay muujinaysaa in tababare Jama Aden uu ka mid yahay, ama ugu horreeyo aqoonta cilmiga tababarida ee caalamka ciyaaraha maanta.